Umshado Emphakathini weNtwana
Ukushada phakathi kweNtwana akuyona into eyodwa kodwa ukukhathazeka kweqembu, ukubhalisa ubuhlobo phakathi kwezihlobo. Ibuye ibeke isimo somuntu omdala kumakoti nomkhwenyana. Nakuba zingekho izinkambiso zokuxhumana phakathi kweNtwana, umshado womzala womshado usamthanda.
Umshado (lenyalo) wenziwa ngezinsuku ezimbili, kuqala ekhaya labazali bomakoti futhi emva kwalokho ekhaya lomndeni womyeni. Naphezu kokuthi abaningi baseNtwana bangamaKristu, imishado iqhutshwa ngokusho komkhuba waseNtwana. Umkhwenyana ugqoka idokodo edolobheni elihlotshiswe ngebhu eyenziwe ngokufihla kwesilwane.
Ngokuphambene nalokho, amadodakazi omakoti agcwele umthamo womshado wendabuko, ohlanganisa inqwaba ekhanda lakhe noma i-headband enezinwele, ngokuvamile ebomvu, eluhlaza okwesibhakabhaka noma emhlophe. Ngaphandle kwepronti yangaphambili nangemuva, ubuye agqoke ingubo okumele agcine ehambisana namahlombe lapho engena emzini kamamazala.
Lokhu kusikisela ukuthi umakoti waseNtwana wenza ukuba azizwe ngesimo sakhe somfokazi kuze kube yilapho uninazala enza umkhuba okhombisa ukuthi ukufakwa okusha emndenini kuyamukelekile ngempela.
Kodwa-ke, ngenkathi umshado waseNtwana ehlanganyela ngesimo somyeni wakhe, empeleni uyabhekwa njengomuntu omdala ekuzalweni kwengane yakhe yokuqala, uma kutholakala ukuthi ukuzala kwakhe kutholakale. Yingaleso sikhathi kuphela ukuthi angagqoka izinto zendabuko zakwabesifazane baseNtwana - ama-aprons angemuva nangemuva - nsuku zonke.